Ndị ahịa na-anwa iru gị na Social Media, You nọ ya? | Martech Zone
5 n'ime 6 arịrịọ ndị ahịa na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi na-azụ ahịa zaa azịza ya. Ulo oru na-aga n'ihu imehie ihe jọgburu onwe ya site n'iji usoro mgbasa ozi na-elekọta mmadụ dị ka usoro mgbasa ozi kama ịchọpụta mmetụta ya dị ka usoro nkwukọrịta. Ogologo oge gara aga, ụlọ ọrụ ghọtara na ọ dị mkpa ijikwa oku mbata ebe ọ bụ na afọ ojuju ndị ahịa bụ njigide na njigide na ọnụ ahịa ndị ahịa bara ụba.
Olu nke arịrịọ mgbasa ozi mmekọrịta amụbawo 77% afọ karịrị afọ. Mana nzaghachi a bụ naanị 5% mmụba site na azụmaahịa. Nke ahụ bụ nnukwu ọdịiche! Gịnị kpatara arịrịọ ọhaneze anaghị enweta otu nlebara anya? Echere m bụ na ndị na-azụ ahịa anaghị atụ anya nzaghachi dịka ha na-eme site na ekwentị ka ha ghara iwe iwe dịka ha na-eme mgbe ha na-anọdụ na oku anaghị aza. Ma ohere maka azụmahịa n'ezie ime ka a na-elekọta mmadụ mmetụta bụ nnukwu na ọtụtụ ọrụ… karịsịa maara na gị asọmpi na-adịghị anabata!
N'ime afọ gara aga, ụfọdụ ọnọdụ dị ịtụnanya pụtara na mkparịta ụka mgbasa ozi mmekọrịta n'etiti ndị ahịa na ndị ahịa. Azụmaahịa Na-ahụ Maka Ahịa na-enye nyocha ngwangwa gbasara usoro niile na ụlọ ọrụ.
The Ndepụta nke mmekọrịta ọha bụ akụkọ chịkọtara ma wepụta site na Sprout Social. Ihe ederede niile edere na-adabere na 18,057 profaịlụ ọha na eze (9,106 Facebook; 8,951 Twitter) nke na-arụ ọrụ mgbe niile n'etiti Q1 2013 na Q2 2014. E nyochara ihe karịrị nde 160 nde n'oge ahụ maka ebumnuche nke akụkọ a.
Tags: na-elekọta mmadụ na-ege ntịmmadụ na-ege ntị statsarịrịọ mgbasa ozi mmekọrịtapuo na-elekọta mmadụepulite mmekọrịta mmadụ na ibe ya